Financing	Small Business Development Center
Laga bilaabo ama sii kordhaya ganacsi qaadataa lacagta. Waxa dhib noqon kartaa milkiilayaasha ganacsiga in ay u ogaato meesha aad ka bilaabi.
Iyadoo SBDC uusan maamulo barnaamijyada amaah ama deeq, waxaan caawinaya ganacsiyada qiimeeyo oo loo garto fursadaha maal-gelinta iyo fursadaha, iyo diyaarinaysaa caddeymo in deyn u baahan. La taliyeyaasha qoto dheer u leenahay aqoon ku saabsan barnaamijyada amaah iyo wixii deyn run ahaantii u baahan tahay ka deynsanaya in la sameeyo si amaah ah.
Tilmaamaha aasaasiga amaahda
5 C ee Credit – Qaybaha aasaasiga ah ee falanqaynta credit isticmaalo by deyn.
xoreeyo. Small Business Administration
Bangiyada iyo hay'adaha kale ee daynta bixiyaan barnaamijyo dhowr ah oo amaah damaanad SBA si ay u caawiyaan yar
ganacsiga. Iyada oo laftiisa Sba ma deyn, sameeyaa deyn ballan ku dhigteen inay u ganacsiyada yaryar by
gaarka loo leeyahay iyo hay'adaha kale.
Barnaamijka Loan SBA Quick Reference Guide
Gobolka Sagaal Guddiga Horumarinta
Tan iyo markii ay 1972, la Wadaage horumarka keentay in horumarinta barnaamijyada
iyo aqoonsiga of xal ee meelaha gabowga, horumarinta dhaqaalaha, ganacsi
horumarinta, bulshooyinka caafimaadka, gaadiidka, horumarinta bulshada, iyo
soo geliyaan khayraad gobolka.
Guddiga Horumarinta Gobolka Sagaal wareegi Funds Loan
Southern Minnesota Initiative Foundation ayaa bio ganacsi-ay mudnaanta ganacsiga ugu sareeya. Iyadoo la raacayo, soo jeedinta adag in la siiyo ahmiyadda koowaad doonaa dhamaan qiimaynta ganacsiga.
Southern Minnesota Initiative Programs Loan Foundation
USDA Programs – Minnesota
Minnesota oo kayd iyo cadaaga Business Loan Program
Deyn lagu maal-kobcinta ah Local
Your magaalada, gobolka ama meel Hay'adda Horumarinta Dhaqaalaha laga yaabaa inay bixiyaan wareegi lacag amaah ah (RLF) mashaariicda horumarinta ganacsiga sida bilaabista ganacsi iyo ballaarinta. Badanaa, iyagu waxaa loo isticmaalaa si loo buuxiyo farqiga maalgelinta mashruuca horumarinta ganacsiga a a. Eligibility iyo shuruudaha kala duwanaan doonaa sanduuq kasta. Baro wax dheeraad ah.
Maxaa ku saabsan Deeqaha?
Raadinta lacag oo lacag la'aan ah si ay u bilaabaan ganacsi yar aad? Inkasta oo waxa laga yaabaa in aad maqashay, Deeqaha waxaa dhif ah la siiyay si ay u bilaabaan-ganacsiyo.
deeq ganacsiga qaarkood waxaa laga yaabaa in la heli karo iyada oo loo marayo barnaamijyada gobolka iyo degmada, ururada samafalka iyo kooxaha kale. Deeqahani waxay sida caadiga ah ma aha lacag oo lacag la'aan ah, oo u baahan karaa qaataha u waafaqayaan lacag ama isku deeqda la noocyada kale ee maalgelinta. Inta ay deeq kala duwan ee la heli karo la ganacsi kasta iyo deeq kasta.
Xukuumadda federaalka uusan siin deeq in ganacsiga yaryar ku hawlan cilmi sayniska iyo horumarinta (R&D) hoos ka Innovation Business Small Research (SBR) Barnaamijka, si kicin tabo cusub farsmada sare.